डोजर लगाएको दुईदिनमै भासियो सडक – indepth.com.np
मध्यपुर थिमी नपा १ लोकन्थलीमा सोमबार राती गएको सुख्खा पहिरो । तस्बिर : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. १ स्थित लोकन्थली हाइटमा गएराति सुख्खा पहिरो जाँदा सात घर उच्च जोखिममा परेको छ ।
पहिरोले लोकन्थली हाइट पुग्ने गोरखनाथ मार्गको १६ फिट चौडा करिब ४२ मिटर सडक खण्ड बगाएको छ । सडकसँगै स्थानीयले प्रयोग गर्ने खानेपानी र ढलको पाइपसमेत बगाएको छ । पहिरोसँगै भिरालो ठाउँमा रहेका दुई रुखसमेत बगेका छन् । विद्युतको एउटा खम्बासमेत पहिरोले लगेको छ । जसले गर्दा लोकन्थली हाइटका सयौं घरपरिवार खानेपानी र विद्युतबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
पहिरोले स्थानीय लक्ष्मणप्रसाद पौडेल, प्रेमबहादुर तामाङ, सन्तोष तामाङ, भरत पौडेल, कृष्णबहादुर थापा, मुकुन्द सापकोटा र कैलाश न्यौपानेको घर उच्च जोखिममा परेको हो ।
करिब ३० फिट पहिरो जाँदा ती घरका जगसमेत देखिएका छन् । यी घरभन्दा करिब दुईफिटमात्रै सडक बाँकी हुने गरी पहिरो गएको छ ।
त्यस्तै हरिबहादुर श्रेष्ठ, शंकरबाबु कोइराला र किरण श्रेष्ठको घर पनि पहिरोको जोखिममा परेका छन् ।
जोखिममा परेका घरलाई खाली गरिएको मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष सुरज खड्काले जानकारी दिए ।
तत्काल पहिरो गएको ठाउँमा सुरक्षा विधि नअपनाए सडक छेउका घरहरु कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने स्थानीय लक्ष्मणप्रसाद पौडेल बताउँछन् । अहिले पहिरो गएको ठाउँमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उपलब्ध गराएको त्रिपाल बिछ्याइएको छ । त्यस्तै थप पहिरो नजाओस् भनेर फलामका रड गाडेर जस्तापाताको टेका लगाइने वडा अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।
पहिरो जानुअघि डोजर लगाइँदै ।
लोकन्थलीमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न ट्यांकी निर्माण गर्न खन्ने क्रममा उक्त पहिरो गएको वडा अध्यक्ष खड्काले बताए । उनका अनुसार गएराति पहिरो गएको सडकमुनि भाद्र १ गते डोजर लगाइएको थियो । डोजर लगाएको भोलिपल्टै सडक भासिएपछि डोजर लगाउन रोकिएको उनले बताए ।
‘तैपनि सडक भासिन नरोकिएपछि भाद्र २ गते सिमेन्टका बोरामा बालुवा भरेर सडक जोगाउन खोजेका थियौं’, वडा अध्यक्ष खड्काले भने, ‘तर गएराति नै सडक भासिएर पहिरो गएछ ।’
उनका अनुसार पहिरो गएको सडक मुनि पर्ती जग्गा रहेको छ । सोही जग्गामा नगरपालिकाको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (काउखालि) ले पाँच लाख लिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गर्न ठेकेदारमार्फत भाद्र १ गते डोजर लगाइएको थियो ।
स्थानीयले वर्षामा डोजर नलगाउन आग्रह गर्दा पनि नरोकिँँदा पहिरो गएको बताएका छन् । उनीहरुले भाद्र १ गते बिहान डोजर लगाउनेवित्तिकै रोक्न ठेकेदारलाई आग्रह गरेका थिए ।
‘बिहान डोजर लाग्नेबित्तिकै हामीले वडा कार्यालय, नगरपालिका र काउखालिमा निवेदन दिएर डोजर लगाउने काम रोक्न भनेका थियौं’, स्थानीय लक्ष्मणप्रसाद पौडेलले भने, ‘तैपनि त्यसदिनभर डोजर लगाइयो । डोजरले सडक उकासेको टेवा पर्खालको जगैमुनि गहिरो गरी खन्दा पहिरो गएको हो ।’
३० फिट टेवा पर्खाल नै ढल्यो
लोकन्थली हाइटमा बस्ती विस्तार भएपछि नयाँ बस्तीका समुदायको पहलमा पर्ती जग्गामा उक्त सडक बनेको थियो । भिरालो जग्गामा करिब ३० फिटको टेवा पर्खाल लगाएपछि माटो परेर करिब १६ फिट फराकिलो बाटो बनाइएको थियो । त्यसैले टेवा पर्खाल लड्नेबित्तिकै पुरुवा माटो पहिरोमा बगेको वडा अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।